I-Tilapia eBhakwe ngokulula (okanye iCod) - Iiresiphi
Easy Baked Tilapia uthweswe isithsaba nge-panko topping yeparmesan kwaye yosiwe kwimfezeko yegolide.
Ithenda, ithambile kwaye igcwele incasa, esi sisidlo esinye usapho lwakho luya kusicela ngokuphindaphindiweyo!
Le iresiphi ilula ilungile ngemizuzu nje eli-15 iyenza ibe yongezwa ngokugqibeleleyo kwimenyu yakho yeveki!
Ndichulumancile kakhulu ukuba ndibe nentsebenziswano neCebo lokuTya ukukuzisela le recipe elula yetilapia.
Ukongeza iintlanzi kwimenyu yethu yeveki yindlela efanelekileyo yokuqhawula ukutya okuluhlaza okwesibhakabhaka!
Abantwana bam bathanda iintlanzi ezibanjiswa zintsha echibini ehlotyeni, kodwa ngexesha lasebusika sisathanda ukongeza intlanzi ekujikelezweni kwethu kokutya.
Ayikhaphukhaphu kwaye imnandi nje kuphela, le tilapia ecolekileyo yeparmesan ipheka ngemizuzu nje iyenza ibe sisidlo sangokuhlwa esigqibeleleyo!
umthuthuzeli wokumkani omkhulu 132 x 120
Iiresiphi ezilula nezilula ezinje nge-Easy Baked Tilapia ayenzi nje isidlo sangokuhlwa ibe yi-cinch, zenza ukutya kwasebusuku beveki kuxoxisane simahla nto leyo endizama ukugxila kuyo kulo nyaka.
Ukucwangcisa ukutya kwam kunye nokuba noluhlu lweendlela zokupheka ezilula ezandleni zam yeyona ndlela igqibeleleyo yokuqalisa unyaka omtsha!
Ucwangciso lweSidlo Senziwe Lulula
Ebudeni beveki iingokuhlwa zethu bezisoloko zibonakala zizele ziziqhelo zebhola ekhatywayo, umsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya kunye nemisebenzi. Ndifumanisa ukuba ukucwangciswa kokutya kuyenye yeendlela ezilungileyo zokuba singaqinisekanga nje ukuba asihendeki ukuba sithathe ukuthatha, kodwa nokudala ukutya okumnandi kunye nokukhawulezayo!
Ukucwangcisa imenyu kunokuba ngumsebenzi omkhulu ukulungelelanisa ukuze usebenzise indawo yokucwangcisa ukutya elula kunye ne-app efana Cwangcisa Ukutya , yenza yonke into ibe lula!
Esi sisixhobo esimangalisayo asenzeli nje ukuba ucwangciso lokutya lube lula, lude ludale uluhlu lwakho lokuthenga igrosari!
Ngemingeni eyonwabisayo kunye neengcinga ezintle (njengoluhlu lukaJanuwari lwe Iiresiphi ezilula zoNyaka oMtsha ) sisixhobo esifanelekileyo kulo naluphi na usapho oluxakekileyo!
Izidlo ezilula zoNyaka oMtsha ukusuka Cwangcisa Ukutya kwi Vimeo .
Kutheni iSidlo seSidlo?
Yonga ixesha kunye nemali! Ukucwangcisa isidlo yindlela efanelekileyo yokulungiselela iveki yakho! Uxinzelelo oluncinci, uhambo olukhawulezayo lokuthenga, kunye nokukhetha okuhle kokutya kulungele ukuhamba!
Cwangcisa Ukutya Iimpawu ezilula ukuzenza iiresiphi kwaye zikuvumela ukuba ungenise kwaye utsale kwaye ulahle iiresiphi kwiibhlog ozithandayo (njengeVeganapati) kwiveki yakho!
Ukuba nayo yonke into kwindawo enye elula kuthetha ukuba akusayi kubakho maphepha asasazekileyo kunye noluhlu lwegrosari olunokuprintwa ngokulula okanye luthunyelwe kwifowuni yakho!
Ndiyavuya kuba le recipe ye-Easy Baked Tilapia iboniswa njengenye kaJanuwari IZIDLO EZULULA KUNYAKA OMTSHA kuCwangciso lokuTya (kunye nezinye iiresiphi ezininzi ezimnandi andinakulinda ukuba ndizame)!
ungayicoca njani ityali enkulu
Buyela kwiresiphi…Ndiyayithanda le-Easy Baked Tilapia kuba ilula nje loo nto...ilula!
Uyipheka njani iTilapia
Ukubhaka i-tilapia kulula kakhulu; ipheka ngokukhawuleza kwaye idinga ukulungiswa okuncinci kakhulu.
Geza kwaye uyomise iifillet, xuba ngebhotela enyibilikisiweyo kunye ne-squeeze ye-lemon. Beka kwi-parchment efakwe epanini okanye efafaziweyo.
Hlanganisa izithako eziphezulu kwaye usasaze ngokulinganayo phezu kweefayili kwaye ubhake! Yiyo leyo!
Kuya kupheka ngokukhawuleza, kushiya ixesha elaneleyo lokudibanisa into elula Cucumber Dill Salad ! Yongeza kumqulu wengqolowa kwaye unesidlo esipheleleyo, esinokulinganisela kunye nesimnandi kwimizuzu!
Ithenda kunye ne-oveni emnandi ebhakiweyo ye-tilapia yimpendulo yexesha lesidlo sangokuhlwa i-humdrum kwaye enye ngokuqinisekileyo uya kufuna ukuyongeza kwisicwangciso sakho semenyu! Tilapia okanye ikhowudi , ngokuthambileyo, incasa eethe-ethe luhlobo olulula lwentlanzi ukuyiphakela.
I-panko topping ibonelela nje ngomlinganiselo ochanekileyo wokutya kwaye i-taste buds yakho iya kuyithanda i-lemon ene-zesty kunye ne-tangy parmesan!
I-Easy Baked Tilapia iKhaphukhaphu kwaye iyagqabhuka kwaye ipheka ifumile kwaye ithenda. Ukutya ngemizuzu wongeze eyakho isicwangciso semenyu yeyona ndlela ilungileyo yokuqalisa unyaka wakho omtsha ngonyawo lwasekunene!
5ukusuka111iivoti ReviewIndlela yokupheka
Ixesha lokulungiselela5 imizuzu Ixesha LokuphekaShumi elinantlanu imizuzu Ixesha elipheleleyoAmashumi amabini imizuzu Iinkonzo4 iinkonzo Umbhali Holly Nilsson Le recipe elula yokubhaka ye-tilapia isithsaba ngoqweqwe olumnandi lweparmesan. Ukutya isidlo sikulungele kwimizuzu eyi-15 nje.
▢4 filets intlanzi emhlophe njenge cod okanye tilapia
▢1 ½ amacephe ibhotolo enyibilikisiwe
▢¼ indebe iimvuthuluka zesonka se-panko
▢Mbini amacephe itshizi entsha yeparmesan
▢½ icephe umgubo wegalikhi
▢½ icephe ipaprika
▢Nye icephe iparsley
▢Nye icephe ibhotolo yanyibilika
Preheat oven ukuya kwi-400°F.
Hlanganisa izithako zokugqoka kwisitya esincinci.
Hlanza iifayili ze-tilapia, zomise kwaye ubeke epanini etshizwe ngesitshizi sokupheka.
Gxuma ngebhotolo. Cinezela ijusi yelamuni phezu kweefayile.
Phezulu kunye nomxube wePanko.
Pheka imizuzu eyi-15 okanye ude uvuthwe kwaye intlanzi ibe shushu.
Broil ngomzuzu wokugqibela ukuba uyafuna
Iikhalori:240,Iicarbohydrates:4g,Iprotheyini:35g,Amafutha:9g,Amafutha aGqithisiweyo:4g,ICholesterol:I-100mg,Isodium:203mg,Potassium:532mg,IVithamin A:390IU,Ivithamin C:8.5mg,Ikhalsiyam:57mg,Iayini:1.3mg
IkhosiIsidlo sangokuhlwa UkutyaUmAsia© SpendWithPennies.com. Umxholo kunye neefoto zikhuselwe kwilungelo lokushicilela. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa kwaye kuyaxatyiswa. Ukukopa kunye / okanye ukuncamathisela iiresiphi ezipheleleyo kuyo nayiphi na imidiya yoluntu akuvumelekanga ngokungqongqo. .
Iiresiphi ezingakumbi oya kuzithanda
I-Pan enye yeSesame yeGinger Salmon kunye neBrokholi
Baked Lemon Ibhotolo Salmon Pasta
I-Lemon Garlic Shrimp Fettuccine
Kuyandivuyisa ukusebenzisana ne-Plan to Eat ukukuzisela le recipe yokufudumala kwesisu. Ngelixa ndihlawulwe ngesi sithuba, zonke iingcinga kunye nezimvo zezam. Ukusebenza neempawu ezintle endizithandayo kundivumela ukuba ndiqhubeke ndikuzisela iiresiphi ezimnandi ozithandayo!
Ngaphezulu Size Wedding Apparel Amaqela Amaqela New Cars Malunga Ukudibanisa Minivans
Ngaba iilibras kunye neegeminis ziyavana
Uyixelela njani indima yokwenyani
Ndinxibe njengentombazana yeHalloween
Kuthetha ntoni kwiimpawu zombhalo
uyisusa njani iringi yangasese emanzini anzima